छोरोले , आफ्नै, आमालाई प्रेमीको साथ यस्तो अवस्थामा देखेपछि यस्तो !!!! – News Nepali Dainik
छोरोले , आफ्नै, आमालाई प्रेमीको साथ यस्तो अवस्थामा देखेपछि यस्तो !!!!
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ ०८, २०७७ समय: १९:२३:४९
जवान छोराले आमालाई आफ्ना प्रेमीका साथ देखेकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । होस्टलमा बस्दै आएका जेठो छोरा छुट्टीमा घर आएका थिए । एक दिन छोरा बाहिर गएको बेलामा आमाले प्रेमीलाई बोलाइन् । तर जेठो छोरा समय भन्दा पहिले घर फर्किए ।
Last Updated on: January 21st, 2021 at 7:33 pm
१०११ पटक हेरिएको